I-FAQs-Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd.
Iyintoni inkonzo kunye nomgangatho weshishini le-Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd.?
Inkampani yethu ijolise kurhwebo lokuwela umda kunye nentengiso yehlabathi kunye nokwenza imveliso ngokwezifiso, ukubonelela ngeenkonzo ezinje ngokubonelela ngendawo, ukukhanya okucwangcisiweyo kokupakisha, ukulebhelisha, uphawu kunye nokwenza ngokwezifiso isitayile semveliso, ubungakanani kunye nombala, kunye neenkonzo ezenziwa ngaphandle
Lunjani umgangatho weemveliso zakho? Kwaye luhlobo luni lwesiqinisekiso olunokuthi lubonelelwe abathengi abanqumle imida?
Umgangatho weemveliso zethu uye wenziwa isithuba seminyaka elishumi elinambini ukusukela oko iimveliso zethu zijolise kwimarike yehlabathi jikelele kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo njengophawu lwethu. Ngaphezu koko, sinikezela iimveliso ezinamanqanaba amaxabiso amaninzi ukuhlangabezana neemfuno zeemarike ezahlukeneyo kwihlabathi jikelele. Ke, umgangatho weemveliso unokuqinisekiswa ngenkonzo yasemva kokuthengisa ixesha elingasikelwanga mda elinikiweyo.
Ngaba ukuhanjiswa kwemveliso yakho kuzinzile?
Senze ikhonkco loncedo oluzinzileyo, kunye neemveliso zeempahla ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-RMB yezigidi ezili-10, nto leyo iyindlela ekhawulezayo yokuhambisa.
Ubungakanani ubungakanani benkqubela phambili yenkampani yakho?
Inkampani yethu ineevenkile ezimbini kwiVenkile yeZizwe eziManyeneyo, iZhejiang. Sikumisele iofisi yethu kwi-World-Wide House, kunye nezityalo zemveliso eJiangsu naseGuangzhou. Wamkelekile abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuza kuthi kwaye bathenge iimveliso zethu.